Rikoooo A380 nidona P3D v3.4
fanontaniana Rikoooo A380 nidona P3D v3.4
1 taona 10 volana lasa izay #572 by acccro14
Manana olana amin'ny Rikoooo A380. Unfortunatly, rehefa mihetsika ny fakan-tsary haingana, P3D mijanona mamaly. Izay tsy hitranga amin'ny fiaramanidina hafa. Olon-kafa izany olana?
1 taona 10 volana lasa izay #579 by Gh0stRider203
Nalefa fiaramanidina tsy misy crashbus an'Andriamanitra mahalala mandra-pahoviana, ka tsy afaka aho mba hanampy betsaka amin'izany. Manantena aho fa misy olona no tonga teny izay afaka. Plus ny rafitra dia tsy tena toa tia P3D LOL
Fotoana mamorona pejy: 0.304 segondra